GADZIRISA WINDOWS 10 HAIZOVHARA ZVACHOSE - NYORO
Gadzirisa Windows 10 haizovhara zvachose
Vazhinji vashandisi varikutaura nyaya uko Windows 10 haizovhara zvachose; pachinzvimbo, ivo vanofanirwa kushandisa bhatani remagetsi kuvhara PC yavo zvachose. Izvi zvinoita senge imwe nyaya yakakosha ne Windows 10 semushandisi uyo achangobva kukwidziridzwa kubva pane yekutanga vhezheni ye OS kuenda Windows 10 inoita kunge iri kutarisana nenyaya iyi.
Saka vashandisi avo vachangobva kukwidziridzwa kuWindows 10 havakwanise kuvhara komputa yavo nemazvo sekunge vachiedza kuvhara, chete skrini inoenda isina chinhu. Zvisinei, iyo sisitimu ichiri ON sezvo marobhoti echiraira achiri kuoneka, Wifi mwenje iripowo ON, uye muchidimbu, komputa haina kuvharwa zvakanaka. Nzira chete yekuvhara ndeye kudzvanya bhatani remagetsi kwemasekonzi 5-10 kumanikidza kuvhara system uye nekuibatidza ON zvakare.
Chikonzero chikuru cheiyi nyaya chinoratidzika kunge chiri chimiro che Windows 10 inonzi Fast Startup. Kukurumidza Startup kunobatsira komputa yako kutanga nekukurumidza kupfuura zvakajairwa kutanga. Iyo inosanganisa iyo hibernation uye yekudzima zvivakwa kuti ikupe iwe inokurumidza boot-up ruzivo. Kutanga nekukurumidza kunosevha mamwe emafaira ekomputa yako kune hibernation faira (hiberfil.sys) kana iwe ukavhara PC yako, uye kana iwe ukavhura ON yako system, Windows inoshandisa aya mafaera akachengetedzwa kubva ku hibernation faira kuti ibhure zvakanyanya nekukurumidza.
Kana iwe uri kutambura nenyaya yekusagona kuvhara komputa yako zvachose. Zvinotaridza sekukurumidza Kutanga kunoshandisa kumusoro zviwanikwa senge RAM uye processor kuchengetedza mafaera mune hibernation faira uye haisi kurega kuenda kune izvi zviwanikwa kunyangwe komputa yakavharwa. Saka pasina kutambisa chero nguva ngatione kuti tingagadzirise sei Windows 10 haizovhara zvachose kuburitsa neye pazasi-yakanyorwa yekugadzirisa matambudziko.
Maitiro 1: Disable Fast Startup
Maitiro 3: Rollback Intel Management Injini Yekushandisa Dhirairi
Maitiro 4: Uncheck Intel Management Injini Yemukati kudzima chishandiso kuchengetedza simba
Maitiro 5: Disable Intel Management Injini Yemukati
Maitiro 6: Mhanya Windows Gadziriso
Maitiro 7: Mhanya Windows Gadziriso Troubleshooter
windows 10 wifi icon isipo
1. Dhinda Windows Key + R wobva wonyora powercfg.cpl uye rova ​​kupinda kuti uvhure Power Sarudzo.
2. Dzvanya pa Sarudza zvinoitwa nemabhatani emagetsi mukoramu yepamusoro-kuruboshwe.
3. Tevere, tinya pa Chinja marongero asiri kuwanikwa izvozvi.
Zvina. Uncheck Dzoka kukurumidza kutanga pasi pekugadzirisa Shutdown.
5. Zvino tinya Sevha Shanduko uye Tangazve PC yako.
Kana izvo zviri pamusoro zvikatadza kudzima kutanga nekukurumidza, saka edza izvi:
1. Dhinda Windows Key + X wobva wadzvanya Raira Kukurumidza (Admin).
powercfg -h yabviswa
3.Kutangazve kuchengetedza shanduko.
Izvi zvinofanirwa kuve zvechokwadi Gadzirisa Windows 10 haizovhare zvachose kuburitsa asi woenderera nenzira inotevera.
Dzimwe nguva 3rd party software inogona kunetsana neSystem, uye saka iyo System inogona kusadzima zvachose. Kuti uzo Gadzirisa Windows 10 haizovhara zvachose , unofanirwa ita bhutsu yakachena muPC yako uye wongorora nyaya nhanho.
1. Dhinda Windows Key + R wobva wonyora devmgmt.msc uye rova ​​Enter kuti uvhure Maneja wedhijitari.
2. Zvino wedzera Sisitimu mudziyo wobva wadzvanya-kurudyi Intel Management Injini Inowanikwa uye sarudza Zvivakwa.
3. Zvino chinja ku Mutyairi tebhu uye tinya Dzorerazve Mutyairi.
komputa yangu inoramba ichirasa internet kubatana windows 10
5. Kana iyo nyaya isina kugadziriswa, saka zvakare enda ku Intel Management Injini Yekushandisa Zvivakwa kubva kuDhijisiti yeMidziyo.
6. Chinja kune Mutyairi tab uye tinya Gadziridza mutyairi uye sarudza Tsvaga otomatiki kune yakagadziridzwa mutyairi software wobva wadzvanya Inotevera.
7. Izvi zvinobva zvagadzirisa Intel Management Injini kune madhiraivha ekupedzisira.
8. Reboot PC yako uye ona kana uchigona zvachose kuvhara kombiyuta yako kana kwete.
mutyairi akakunda stack buffer kuhwina 10
9. Kana uchiri wakabatirira ipapo uninstall Intel Management Injini Yekufambisa madhiraivha kubva kumaneja wemidziyo.
10.Reboot PC yako neWindows zvinobva zvangoisa zvoga madhiraivha.
3. Chinja kuPower Management tab uye uncheck Rega komputa idzime mudziyo uyu kuchengetedza magetsi.
4. Dzvanya Nyorera, uchiteverwa na Zvakanaka.
2. Zvino wedzera Sisitimu mudziyo wobva wadzvanya-kurudyi Intel Management Injini Inowanikwa uye sarudza Disable.
3. Kana ukabvunzwa kusimbiswa, sarudza Hungu / OK.
1.Type kugadzirisa muWindows Search bar uye tinya pa Dambudziko rekugadzirisa.
2. Tevere, kubva kuruboshwe hwindo, pane sarudza Wona zvese.
windows 10 vhezheni 1903 haigadzike
4. Tevedzera pa - screen kuraira uye rega iyo Windows Dzokorora Matambudziko kuti imhanye.
5. Tangazve PC yako kuchengetedza shanduko.
Izvi zvinofanirwa kukubatsira kugadzirisa Windows 10 haizovhare zvachose kuburitsa asi kana zvikasadaro enderera nenzira inotevera.
Iyi nzira ndiyo yekupedzisira tarisiro nekuti kana pasina chinoshanda, saka, iyi nzira ichagadzirisa zvirokwazvo matambudziko ese nePC yako. Kugadzirisa Kuisa kunoshandisa in-nzvimbo yekuvandudza kugadzirisa nyaya nehurongwa pasina kudzima mushandisi data iripo pane ino sisitimu. Saka tevera ichi chinyorwa kuti uone Maitiro Ekugadzirisa Kuisa Windows 10 Nyore.
Gadzirisa Matema Mativi Kuseri kweFolder Icons
Gadzirisa Task Shedhiyo sevhisi haina kuwanikwa kukanganisa
Maitiro ekugadzirisa USB Ports Kwete Kushanda muWindows 10
Gadzirisa File Explorer Tsvaga Isingashande muWindows 10
Ndikwo kuti wabudirira Gadzirisa Windows 10 haizovhara zvachose asi kana uchine chero mibvunzo zvine chekuita negwara rino saka inzwa wakasununguka kuvabvunza muchikamu chemashoko.
windows 10 mail app inovhara otomatiki
bhuruu screen irql kwete zvishoma kana kuenzana
realtek wifi adapter kodhi 10
maitiro ekusetazve windows kugadzirisa windows 10